Umxholo weThala leencwadi: Yintoni le? Kwaye kutheni isiCwangciso sakho seNtengiso siSilela ngaphandle kwaso | Martech Zone
Kwiminyaka eyadlulayo sasisebenza kunye nenkampani eyayinezigidi zamanqaku ezipapashiweyo kwindawo yazo. Ingxaki yayikukuba bambalwa kakhulu amanqaku afundwayo, nangaphantsi kwinqanaba lokukhangela kwiinjini zokukhangela, kwaye ngaphantsi kwepesenti enye kubo babenengeniso enikezelwe kubo.
Ndingakucebisa ukuba uphonononge ilayibrari yakho yomxholo. Ndiyakholelwa ukuba ungothuka kukuba yeyiphi ipesenti yamaphepha akho athandwayo kwaye azibandakanya nabaphulaphuli bakho, ungasathethi ke ukuba ngawaphi amaphepha akwiinjini zokukhangela. Sisoloko sifumanisa ukuba abathengi bethu abatsha bakwigama elinophawu kuphela, kwaye bachitha amawaka eeyure kumxholo ekungekho mntu ufundayo.
Lo mthengi wayenabasebenzi abahleli abapheleleyo nabahleli nababhali… kodwa babengenaso isicwangciso esiphambili Intoni ukubhala. Babhala nje ngamanqaku abawabona benomdla. Siphicothe umxholo wazo safumana imiba ekhathazayo… safumana amanqaku amaninzi kumanqaku ahlukeneyo ngesihloko esinye. Emva koko safumana itoni yamanqaku angakhange abekwe, ayabandakanyeka, kwaye abhalwa kakubi. Babenazo nezinto ezimbalwa ezintsonkothileyo kwenziwa kanjani amanqaku angenazo neefoto ezifakiwe.
Khange sicebise kwangoko isisombululo. Sababuza ukuba singayenza na inkqubo yokulinga apho sisebenzisa khona i-20% yezixhobo kwigumbi leendaba ekuphuculeni nasekuhlanganiseni umxholo osele ukhona kunokuba sibhale umxholo omtsha.
Injongo yayikukuchaza i ilayibrari yomxholo -Kwaye ke ube nenqaku elinye elipheleleyo nelibanzi ngesihloko ngasinye. Yayiyinkampani yesizwe, ke siye saphanda ngesihloko ngokusekwe kubaphulaphuli babo, kwizikhundla zabo zokukhangela, ixesha lonyaka, indawo, kunye nabo bakhuphisana nabo. Sinike uluhlu oluchaziweyo lomxholo, olucwangciselwe inyanga nenyanga, olwalubekwe phambili kuphando lwethu.
Isebenze njengekhubalo. I-20% yezixhobo esizisebenzisileyo ukwakha ithala leencwadi elibanzi lingaphezulu kwe-80% yomnye umxholo oveliswe ngengozi.
Icandelo lomxholo lisukile ku:
Yimalini umxholo esiza kuwuvelisa veki nganye ukufezekisa iinjongo zemveliso?
Kwaye watshintshela ku:
Nguwuphi umxholo ekufuneka siwulungisile kwaye siwudibanise ngokulandelayo ukonyusa imbuyekezo kutyalomali lomxholo?
Kwakungekho lula. Side sakha i-injini enkulu yohlalutyo lwedatha yokuchonga i-odolo ephambili kwimveliso yokuqulathiweyo ukuqinisekisa ukuba sifumana eyona ROI ilungileyo kwimithombo yomxholo. Lonke iphepha lahlelwa ngamagama aphambili, amagama aphambili abekwe ngokwendawo, ijografi (ukuba kujoliswe kuyo), kunye noqoqosho lwerhafu. Sichonge ke umxholo obekwe kwinqanaba lokukhuphisana- kodwa awuzange ubekwe kakuhle.
Into ebangela umdla kukuba, ababhali nabahleli bayayithanda. Babonelelwe ngesihloko, umxholo okhoyo ekufuneka ubhekiswe kwinqaku elitsha elipheleleyo, kunye nomxholo okhuphisanayo ovela kuyo yonke iwebhu. Ibanike lonke uphando abaludingayo ukuze babhale inqaku elibhetele, elinomdla kakhulu.
Kutheni le nto kufanelekile ukuba wakhe iThala leeNqaku
Nantsi ividiyo emfutshane yokwazisa ukuba lithini na ithala lencwadi kwaye kutheni isicwangciso sokuthengisa umxholo kufuneka sibandakanye le ndlela.
Iinkampani ezininzi ziqokelela amanqaku ngezihloko ezifanayo ngokuhamba kwexesha, kodwa undwendwe kwindawo yakho aluzukucofa kwaye uzulazule ukuze ufumane ulwazi abaludingayo. Kunyanzelekile ukuba udibanise ezi zihloko zibe nye, zibanzi, zilungelelaniswe kakuhle inkosi kwinqaku ngesihloko ngasinye esiphambili.
Uyichaza njani iThala leNqaku lakho
Imveliso okanye inkonzo yakho, isicwangciso sakho somxholo kufuneka sizibandakanye kwinqanaba ngalinye le- uhambo lomthengi:
Ukuchongwa kwengxaki -Ukunceda umthengi okanye ishishini ukuba liqonde ngcono ingxaki yabo kunye nentlungu ebangela ukuba wena, indlu yakho, okanye ishishini lakho.
Isisombululo sokuKhangela -Ukunceda umboleki okanye ishishini ukuba liqonde ukuba isonjululwa njani ingxaki. Ukusuka kwividiyo 'yokwenza njani' ngeemveliso okanye iinkonzo.
Izakhiwo zokwakha -Ukunceda umthengi okanye ishishini liqonde indlela yokuvavanya ngokupheleleyo isisombululo ngasinye ukuze baqonde okona kulungileyo kubo. Eli linqanaba elihle apho ufumana ukuqaqambisa umahluko wakho.
Ukhetho loMthengisi -Ukunceda abathengi okanye ishishini baqonde ukuba kutheni kufanele bakhethe wena, ishishini lakho, okanye imveliso yakho. Kulapho ufuna ukwabelana ngobuchule bakho, izatifikethi, ukwamkelwa ngumntu wesithathu, ubungqina babathengi, njl.
Kumashishini, unokufuna ukunceda umntu ophandayo ukuba aqonde indlela yokuqinisekisa ukhuphiswano lwakho ngalunye kwaye akubeke phambi kweqela lakhe ukuze wakhe isivumelwano.
Amacandelo eziyilwe kakuhle kwaye kulula ukuzikroba ukusuka kwisihlokwana ukuya kwisihlokwana.
Research ukusuka kwimithombo yokuqala kunye neyesibini ukubonelela ngokuthembekileyo kumxholo wakho.
Uluhlu oluneembumbulu ngamanqaku aphambili kwinqaku elichazwe ngokucacileyo.
Imifanekiso. Isithonjana sommeli sokwabelana, imizobo kunye neefoto naphi na apho kunokwenzeka khona kwinqaku ukuze uchaze ngcono kwaye wakhe ukuqonda. I-Micrographics kunye ne-infographics zazingcono nangakumbi.
Ividiyo kunye neAudio ukubonelela ngesishwankathelo okanye inkcazo emfutshane yomxholo.
Ngokusebenza nomthengi wethu, a ukubala amagama yayingeyona njongo iphambili, la manqaku asuka kumakhulu ambalwa ukuya kumawaka ambalwa amagama. Amanqaku amadala, amafutshane, angafundanga alahliwe kwaye aqondiswa kumanqaku amatsha, atyebileyo.
I-Backlinko ihlalutye ngaphezulu kwesiphumo sesigidi kwaye yafumana umndilili wephepha le- # 1 elinamagama ayi-1
Le datha ixhase indawo yethu kunye neziphumo zethu. Iguqulwe ngokupheleleyo indlela esijonga ngayo ekwakheni izicwangciso zomxholo kubaxhasi bethu. Asisenzi lumbi lophando kunye nokuveliswa kwamanqaku amaninzi, i-infographics kunye namaphepha amhlophe kwakhona. Siyile ngabom i Ithala leencwadi kubathengi bethu, uphicotha umxholo wabo wangoku, kwaye ubeke phambili izithuba ezifanelekileyo.
Ngaphezulu Martech Zone, Senza oku. Bendihlala ndiziqhayisa ngokuba ndinezithuba ezingaphezu kwama-10,000. Uyakwazo oko? Siyinciphisile ibhlog yayo malunga nezithuba ze-5,000 kwaye siqhubeke nokubuyela umva veki nganye kwaye sicebise izithuba ezindala. Ngenxa yokuba ziguqulwe kakhulu, siyazipapasha kwakhona njenge entsha. Ukongeza, ngenxa yokuba bahlala behleli kwaye benama-backlinks kubo, bayaphakama kwiziphumo zeinjini yokukhangela.
Ukuqalisa ngesiCwangciso sakho seThala leeNcwadi
Ukuqala, ndingacebisa ukuthatha le ndlela:
Ngawaphi amathemba kunye nabaxhasi abaphanda kwi-Intanethi malunga isigaba ngasinye kuhambo lomthengi oko kuya kubakhokelela kuwe okanye kwabo ukhuphisana nabo?
Intoni balamli kufuneka ufake? Amanqaku, imizobo, amaphepha okusebenzela, amaphepha amhlophe, izifundo zetyala, ubungqina, iividiyo, iipodcast, njl.
Intoni yangoku umxholo onayo kwindawo yakho?
Intoni uphando ungafaka kwinqaku ukomeleza kunye nokwenza umxholo wayo?
Kwinqanaba ngalinye nakwinqaku ngalinye, yintoni injini yokukhangela khuphiswanoamanqaku ajongeka njani? Ungayila njani ngcono?
Ukubhala malunga ninaInkampani nganye iveki ayizukusebenza. Kuya kufuneka ubhale malunga nethemba lakho kunye nabaxhasi. Iindwendwe azifuni ukuba thengiswa; bafuna ukwenza uphando kwaye bafumane uncedo. Ukuba ndithengisa iqonga lokuthengisa, ayisiyiyo nje into esinokuyifeza okanye oko kwenziwa ngabathengi bethu besebenzisa isoftware. Yindlela enditshintshe ngayo umsebenzi wabathengi bam kunye neshishini abalisebenzeleyo.
Ukunceda abathengi bakho kunye nethemba yintoni eqhuba abaphulaphuli bakho ukuba babubone ubungcali kunye negunya kolu shishino. Kwaye umxholo awunakukhawulelwa kwindlela iimveliso kunye neenkonzo zakho ezibanceda ngayo abathengi bakho. Usenokudibanisa nezinto ezinokubandakanya amanqaku malunga nommiselo, ingqesho, ukudityaniswa, kunye nawo nawuphi na umxholo apho amathemba akho alwa nawo emsebenzini.
Uphanda njani izihloko zakho zethala leencwadi
Ndihlala ndiqala ngezixhobo zophando ezintathu zomxholo endiwuphuhlisayo:
Uphando lwezinto eziphilayo ezivela Semrush Ukuchonga ezona mxholo ziphandwe kakhulu kunye namanqaku ahambelana nomnqweno endinqwenela ukuwutsala. Gcina uluhlu lwamanqaku aloluhlu aluncedo, ngokunjalo! Uya kufuna ukuthelekisa inqaku lakho ukuqinisekisa ukuba ungcono kunabo.
Ukwabelana ngokwentlalo ngophando oluvela kwiBuzzSumo. I-BuzzSumo ilandelela ukuba amanqaku abiwe kaninzi kangakanani. Ukuba unganqamla ukuthandwa, ukwabiwa, kwaye ubhale elona nqaku libalaseleyo ngesihloko-amathuba akho okuvelisa ukubandakanyeka kunye nengeniso aphezulu kakhulu. UBuzzSumo ubhale inqaku elihle kutshanje malunga nendlela yokuyisebenzisa Uhlalutyo lomxholo.
Ugqibelele Uhlalutyo lwetaxonomy Ukuqinisekisa ukuba inqaku lakho ligubungela yonke into engezantsi enxulumene nesihloko. Phuma Phendula iPublic Olunye uphando olumangalisayo kwi-taxonomy yezihloko.
Yakha uluhlu olukhulu lwezi zihloko, zibeke phambili ngokubaluleka, kwaye uqalise ukukhangela indawo yakho. Ngaba unomxholo ochukumisa esi sihloko? Ngaba unawo umxholo onamagama aphambili? Ukuba inokuphuculwa- bhala kwakhona amanqaku atyebileyo, apheleleyo. Emva koko yenza umxholo onceda amathemba akho kunye nabaxhasi ngokulandelayo.
Yenza ikhalenda yakho yesiqulatho ngezinto eziphambili. Ndingacebisa ukwahlula phakathi kwexesha lokuhlaziya elidala kunye nokubhala elitsha de ibe igqityiwe ilayibrari yakho. Kwaye enkosi ngokutshintsha kweendawo zeshishini, ukuqhubela phambili kwetekhnoloji, kunye nokhuphiswano-kuhlala kukho izihloko ezitsha ezongezwayo kwilayibrari yakho.
Njengoko udibanisa amanqaku amadala kumanqaku amatsha, abanzi, qiniseka ukutshintsha amanqaku amadala ngolungelelwaniso. Ndihlala ndiphanda ukuba inqaku ngalinye libekwa njani kwaye emva koko ndisebenzise eyona mvume iphambili yenqaku elitsha. Xa ndisenza oku, iinjini zokukhangela zihlala zibuya zize zikubeke ngaphezulu. Ke xa isaziwa, inyuka isesibhakabhakeni ngokwenqanaba.
Amava akho eMxholo
Cinga ngenqaku lakho njengoko umqhubi wenqwelomoya eza kungena endaweni yokumisa. Umqhubi wenqwelomoya akajolisanga emhlabeni… uqala ngokukhangela iimpawu zomhlaba, ehla, emva koko ajolise ngakumbi nangakumbi de inqwelo-moya iye yehla.
Abantu ekuqaleni abalifundi inqaku igama negama, bona scan yiyo. Uya kufuna ukusebenzisa iintloko, ubugorha, ugxininiso, iikowuti zeebhloko, imifanekiso, kunye neendawo zebhulethi ngokufanelekileyo. Oku kuyakuvumela abafundi ukuba bajonge amehlo kwaye bajonge. Ukuba inqaku elide ngokwenene, usenokufuna ukuliqala ngetafile yemixholo eneethegi zeankile apho umsebenzisi anokucofa khona kwaye atsibele kwicandelo elinomdla kubo.
Ukuba ufuna elona thala leencwadi libalaseleyo, amaphepha akho kufuneka amangalise. Inqaku ngalinye kunye nenqaku ngalinye kufuneka libe nazo zonke iindlela ezifanelekileyo zokuchaphazela ngokupheleleyo undwendwe kwaye zibanikeze ngolwazi abalufunayo. Kufuneka icwangciswe kakuhle, ibe nobungcali, kwaye ibe namava omsebenzisi awodwa xa kuthelekiswa nabantu okhuphisana nabo:
Ungalibali ukubizwa kwakho ukuba uthathe isenzo
Umxholo awunamsebenzi ngaphandle kokuba ufuna umntu oza kuthatha inyathelo kuwo! Qiniseka ukuba yazisa abafundi bakho ukuba yintoni elandelayo, zeziphi izehlo oza nazo, indlela abanokucwangcisa ngayo idinga, njl.
tags: backlinkoilayibrari yomxholoUkuThengiswa kweMpahlaisicwangciso sokuthengisaimveliso umxholoInqanaba likagooglemangaphi amagama ekufuneka iposti yebhlog ibeIthala leencwadiuphandosemrushisibalo samagama